Dagaal culus oo Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda Ku Dhexmaray Gobalka Shabeelada Hoose – STAR FM SOMALIA
Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Dowladda Federaalka Somalia iyo kuwa Shabaab ayaa ka dhacay deegaano hoostagga Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose, kadib markii dagaalkaasi ay soo qaadeen Dagaalamayaal ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Xoogag hubaysan oo Shabaab ka tirsan, kana soo duulay Dhanka Degmada Awdheegle, ayaa weerar ku ekeeyay Tuulooyinka Caanoole iyo Mareereey oo duleedka Afgooye ah,waxaana Shabaab u suuragashay inay qabsadaan deeganadii ay soo weerareen.
Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta labadaasi Tuulo ee Caanoole iyo Mareereey xalay markii dagaal ay uga saareen ciidamada Dowladda sida uu xaqiijiyay Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelaha hoose C/fataax Xaaji Cabdulle.
Masuulkaan ayaa sheegay kolkii Shabaab ay qabsadeen tuulooyinkaasi, ciidanka dib ay isku abaabuleen oo ay ku noqdeen deeganadii Shabaabka ay qabsadeen, waxaana halkaasi dib ula wareegay ayuu yiri ciidamada Dowladda oo Nabad Suggid iyo Milateri isugu jira.
Khasaaro Dhimasho iyo Dhaawac ah ayaa ka dhashay dagaalkaasi, dhexmaray ciidamada Dowladda iyo kuwa Shabaab ee ka dhacay Gobolka Shabeellaha hoose, waxaana Guddoomiye ku xigeenka Gobolkaasi uu sheegay inaysan hayn tirada rasmiga ah ee Askarta Dowladda waxyeelada kasoo gaartay dagaalka, balse ay jiraan ciidamo dhaawac ah.
Xoogaga Shabaab ayuu ku eedeeyay inay horay u sii qaateen qalab yaalay MCH ku yaallo deeganadii ay qabsadeen, qalabkaasi oo loogu adeegaayay Bulshada deegaanka.
Deeganada lagu dagaalamay ee Mareereey iyo Caanoole, ayaa Afgooye u jira Khiyaastii 15 ilaa 17 KM, waana deegano dhowr mar Shabaab ay soo weerareen.
Ciidamada Shabaabka ee weeraray deeganadan ayaa iska soo abaabulay Awdheegle iyo Mubaarak, iyaga soo maray wadooyinka hareer mara Wabiga Shabeelle.